Sunday, Jenụwarị 8, 2017 Sunday, Jenụwarị 8, 2017 Ọnye na -bụ Frank Bria?
Otu n’ime ajụjụ m na-anụkarị bụ: Kedu ka ị si mara ozi ị ga-eji maka peeji ọdịda ma ọ bụ mkpọsa mgbasa ozi Ọ bụ ajụjụ ziri ezi. Ozi na-ezighi ezi ga-emeri nhazi dị mma, ọwa kwesịrị ekwesị, na ọbụlagodi nnukwu ego. Azịza ya bụ, n'ezie, ọ dabere n'ebe olile anya gị dị na usoro ịzụ ahịa. Enwere usoro 4 dị mkpa na mkpebi ịzụta ọ bụla. Kedụ ka ị ga - esi kwuo ebe olile-anya gị dị